‘फिफा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी’ रोनाल्डो, सलाह कि मोड्रिच ? «
‘फिफा उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी’ रोनाल्डो, सलाह कि मोड्रिच ?
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७५, आईतवार १६:४७
एजेन्सी । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सोमबार फिफा वर्ष खेलाडी (फिफा द बेष्ट) अवार्डको घोषणा गर्दैछ । इंग्ल्यान्डको लन्डनस्थित रोयल फेस्टिबल हलमा हुने विशेष समारोहकाबीच फिफाले उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषणा गर्दैछ । फिफाले वर्ष खेलाडीसंगै वर्ष प्रशिक्षक, वर्ष महिला खेलाडी र वर्ष महिला प्रशिक्षकको घोषणा गर्नेछ । फिफा द बेष्ट अवार्डको लागि मैदानमा छन्, तीन प्रतिस्पर्धी । जसमा साबिकको विजेता रहेका युभेन्ट्सका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लिभरपुलका मोहमद सलाह र रियल मड्रिडका लुका मोड्रिच रहेका छन् ।
फिफाले गत बर्षको जुलाई ३ बाट यस बर्षको जुलाई १५ सम्म खेलाडीले क्लब र राष्ट्रको लागि गरेको प्रदर्शनको आधारमा शीर्ष तीनको छनोट गरेको छ । यसपटक गत वर्षको उपविजेता रहेका बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सीले शीर्ष तीनमा अटाउन सकेनन् । मेस्सी १२ बर्षपछि पहिलोपटक शीर्ष तीनमा पर्न असफल भएका हुन् । मेस्सी सन् २००६ बाट लगातार शीर्ष तीनमा पर्दै आएका थिए । मेस्सी शीर्ष तीनमा पर्न असफल भएसंगै सोमबार रोनाल्डो, सलाह र मोड्रिचबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
पोर्चुगलका स्टार रोनाल्डोले गत सिजन रियल मड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । यसै सिजन युभेन्ट्स गएका रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता चुनिएका थिए । रोनाल्डोले रियललाई क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि समेत दिलाएका थिए । रुस विश्वकपमा पोर्चुगलले अन्तिम १६ को यात्रा गर्दा रोनाल्डोले उच्च प्रदर्शन गरेका थिए । रोनाल्डोले स्पेनविरुद्ध ह्याट्रिक नै गरेका थिए । यस्तै इजिप्टका सलाहको उच्च प्रदर्शनले लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगको फाइनल यात्रा तय गरेका थिए । सलाह इन्ग्लिश प्रिमियर लिगमा गत सिजन सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए ।
क्रोएसियाका लुका मोड्रिच गत सिजन रियलले च्याम्पियन्स लिग जित्दा महत्वपूर्ण खेलाडी थिए । उनको प्रेरणादायी भूमिकाका कारण क्रोएसियाले पहिलोपटक विश्वकपको फाइनल यात्रा गरेको थियो । यस्तै रुस विश्वकप उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै मोड्रिचले गोल्डेन बल जितेका थिए । मोड्रिच यसै वर्ष युरोपियन वर्ष खेलाडी घोषित भएका थिए । फिफाले सधै झैँ यसपटक पनि राष्ट्रिय टिमका कप्तान र प्रशिक्षक तथा खेल पत्रकारको मतको आधारमा वर्ष खेलाडी चयन गर्नेछ । फिफाले फ्रान्सको फुटबल म्यागजिनसँगको सहकार्यमा प्रदान गर्दै आएको बालोन डी’ ओर अवार्डबाट छुट्टिएर दुई बर्ष अघिबाट अलग्गै वर्ष खेलाडीको घोषणा गर्दै आएको छ ।
फिफा अवार्डका प्रतिस्पर्धी :फिफा वर्ष पुरुष खेलाडी : क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मोड्रिच, मोहमद सलाह । फिफा वर्ष महिला खेलाडी : मार्टा, अदा हेजेरबर्ग, डीज्नीफर मारोजसान । फिफा बर्ष पुरुष प्रशिक्षक : डीडीएर डेसच्याम्प, लाट्को डालिस, जिनेदान जिदान । फिफा बर्ष महिला प्रशिक्षक : रेनाल्ड पेड्रोस, आसाको ताकाकुरा, सरिना विगम्यान ।